नेपालका डेभलपरहरू सक्षम भइसके, ठूला आयोजना अघि बढाउन अनुमति दिए हुन्छ - आर्थिक पाटी
२०७८-०६-७ बिचार / प्रतिक्रिया
नरेन्द्रवल्लभ पन्त, अध्यक्ष, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर
नरेन्द्रवल्लभ पन्त युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी २६ वर्षको उमेरदेखि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लागेका युवा डेभलपर हुन् । हाइड्रोपावर क्षेत्रमा १३ वर्षभन्दा बढीको अनुभव सँगालेका उनलाई एक सफल युवा डेभलपर भनेर पनि चिनिन्छ । ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर र १५ मेगावाटको अपर ठूलो खोला हाड्रोपावर पनि उनको आफ्नै लगानीमा निर्मित आयोजना हुन् । उनको टक्सार पिखुवा खोलाले गत वैशाखदेखि उत्पादन दिन थालिसकेको छ भने अपर ठूलो खोला हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पन्तको शेयर सिँगटी हाइड्रोपावरमा पनि छ । सुरुमा सहकारी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र रियल इस्टेट कम्पनीहुँदै हाइड्रोपावर क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पन्तले आफूले गरेका सबै व्यवसाय अझैसम्म सञ्चालनमै राखिराखेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगाल्दै अगाडि बढेका उनी सबै क्षेत्रभन्दा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित हुने बताउँछन् । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना सफल रुपमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेका नेपाली डेभलपरहरू अनुभवले खारिएका कारण अब ठूला आयोजना पनि निर्माण गर्न सक्ने भइसकेको दाबी गर्छन् पन्त । भन्छन्, ‘अब नेपालको निजीक्षेत्र ठूला आयोजना बनाउन सक्ने भइसकेको छ । सरकारले अनुमति दिए मात्र पुग्छ ।’ आयोजनाको लाइसेन्स पिरियड कम्तीमा ५० वर्षको बनाउन आवश्यक रहेको बताउने पन्त रुग्ण आयोजनालाई उठाउन सहुलियत ऋण प्याकेज र कोरोना महामारीको चपेटामा परेर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका लागि सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राख्छन् । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाका विद्यमान समस्या, तिनको निराकरण, कोरोना महामारीबाट परेको असर, सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत, वैदेशिक ऊर्जा व्यापारको सम्भावनालगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, मोदी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष, इप्पानका सदस्य, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य तथा ऊर्जा समितिका सभापति नरेन्द्रवल्लभ पन्तसँग आर्थिक पाटीका सम्पादक मदन लामिछानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं अहिले कुनकुन आयोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? लगानी कहाँकहाँ गर्नुभएको छ ?
पर्वत जिल्लामा प्लान्ट रहेको १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरमा शेयर लगानी गरेर हाइड्रोपावर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । यो आयोजना १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । मेरो यस क्षेत्रमा प्रवेश नै यसै आयोजनाबाट भएको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको पनि ९ वर्ष भयो । युनाइटेड मोदीकै आम्दानीले अहिले हामीले ५० मेगावाटको मेवाखोला आयोजनामा ३० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका छौँ । हाम्रो २५ मेगावाटको सिँगटी हाइड्रो इनर्जीमा पनि लगानी छ । यसमा पनि म बोर्ड अफ डिरेक्टर छु । त्यससँगसँगै अहिले मेरो आफ्नै लगानीको ८ मेगावाटको टक्सार पिखुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ । गत वैशाखदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा यो आयोजना जोडिएको हो । पछिल्लो चरणको नयाँ आयोजना भन्नुपर्दा हामीले १५ मेगावाटको अपर ठूलो खोला हाइड्रोपावरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ । यस आयोजनाको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ । अब यो हिउँदबाट कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुनेछ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासबारे यहाँको धारणा के छ ?
मैले सुरुमा मोदी हाइड्रोपावरमा काम गर्दाको समय अर्थात् ९÷१० वर्षअगाडि लोडसेडिङको अवस्था एकदमै पिक आवरमा थियो । त्यो बेला दिनकै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था थियो । हामीले मोदीमा उत्पादन सुरु गरेपछि हाम्रा इन्जिनियरहरूले भन्थे– पोखराका जनताले हाम्रो उत्पादनबाट १० मिनेटका लागि चाहिँ लोडसेडिङबाट राहत पाए । त्यो बेला मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो, लोडसेडिङ घटाउने कार्यमा हामीले पनि केही न केही योगदान गरेछौँ भनेर । त्यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपालमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नै आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निजीक्षेत्र धेरै दुःख गरेर लाग्यो । दुःख गरेर लागेकैले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा बढी योगदान निजी आयोजनाबाटै पुगेको देखिएको छ, जसले गर्दा लोडसेडिङ हट्दै गयो । बितेको १० वर्षको पिरियड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो । लोडसेडिङको घेराबाट देशलाई लोडसेडिङमुक्त घेरामा उकाल्न निजीक्षेत्रका आयोजनाले विगत १० वर्षमा पु¥याएको योगदान सम्झनयोग्य छ । यो कुरा राज्यले पनि भुल्नु हुँदैन ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ?
मैले यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव बटुलिसकेको हुँदा र म आफैँ पनि डेभलपर भएकाले म के भन्छु भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीभन्दा यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी बढी सुरक्षित हुन्छ । रह्यो कुरा साधारण लगानीकर्ताको । डेभलपर सुरक्षित रहेको कम्पनीमा साधारण जनताको शेयरको लगानी पनि सुरक्षित त यसै हुने नै भयो नि । फेरि हाइड्रोपावर भनेको नाफा दिइरहने कम्पनी हो । लगानीका लागि हाइड्रोपावर एकदमै आकर्षक क्षेत्र हो । हाइड्रोपावर भनेको सरकारसँग ३० वर्षको सम्झौता गरेर सुरु हुने आयोजना हो । सम्झौता हुँदै विद्युत् खरिद मूल्य निर्धारण भइसकेको हुन्छ । त्यसो हुँदा नाफा कति हुने र खर्च कति हुने भन्ने पहिल्यै निश्चित गरिएको हुन्छ । सबै कुरा पहिल्यै छर्लङ्गै भएपछि त यो क्षेत्र लगानीका लागि सुरक्षित नहुने कुरै भएन नि । न यसमा प्रतिस्पर्धा नै छ, न यसका लागि विज्ञापन नै गर्नुपर्छ । आयोजना नबनुञ्जेलसम्म मात्र हो दुःख पर्ने, बनिसकेपछि त नाफा खुरुखुरु दिइरहने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा कत्ति पनि जोखिम छैन ।